Kunyatsoita yako Mari yekuita Mari Martech Zone
China, Kurume 20, 2008 Chitatu, Ndira 4, 2017 Douglas Karr
Kuita mari nezveblog kwakaoma kunze kwekunge uine yakawanda traffic kana kana uine niche yakakura. Ini ndinomhanya mashoma akasiyana ekushambadzira matekinoroji pane yangu saiti uye ndakafadzwa nemari yandawana. Imwe yenyaya ine kumhanya kushambadza nzvimbo iri kuwana zvakanyanyisa kubva muzvivakwa. Iwe unomhanya kuratidza kushambadzira? Mabhanhire? Mabhatani? Zvinyorwa zvinyorwa?
Ini ndinotenda iyi ndiyo pfungwa iri kumashure kwekuyedza kutsva senge Rubicon Project (iyo yakawedzera mari yangu pamubhadharo-wega-kubaya kushambadzira katatu pablog rangu). Sisitimu yavo inoongorora mashandiro pazvishambadziro uye inogadzirisa kushambadza kunoratidzwa ipapo zvinoenderana.
Tarisa uone kwandakasarudza 'kutamba' uye ndigadzirise zvangu ... zvisina kunaka:
Chizvarwa Chinotevera Chekuita Mari
Tevere pawebhu pane zvinoshandiswa zvinobvumidza vese muparidzi uye mushambadzi kutonga kuzere, hazvo. ContextWeb, inotungamira yemamiriro ekushambadzira kambani yakazivisa nezuro kuti ivo vari kuvhura ADSDAQ Exchange Agency Kutengesa Desk. Hechino bhurocha kubva kwavo Press Kuburitswa:
MaAgency anotarisana nenyaya dzakaomarara dzekushandisa zvinobatika midhiya uye kuwana kune zvinoitika zvinoitika munguva yekuparadzaniswa kwevateereri. Ivo vanozoshandisa iyo ADSDAQ Exchange Agency Kutengesa Desk kubatanidza mashandiro kune mamiriro kune ese madhijitari mushandirapamwe media shandisa. Ichishandisa iyo imwecheteyo nguva chaiyo enjini injini inopa simba kukambani midhiya bhizinesi, dhijitari agency inogona kushandisa iyo ADSDAQ Exchange Agency Trading Desk pakutenga pazvivakwa, mawebhusaiti eshambadziro uye saiti yakatarwa inotenga kuputsa kutenga muzvikamu zvemukati uye batanidza mushandirapamwe kuita pamwe nezvikamu izvi. . Iyo sevhisi inoshanda zvakasiyana kubva kune yekambani midhiya bhizinesi.
Kamwe kana mutengi kana muongorori agamuchira ongororo iyi, iyo agency inogona? Nekusundidzira bhatani? Kutenga zvimwe zvinyorwa izvo zviri kushandira mushandirapamwe wakapihwa uye kutengesa chero hesitori iri kuita zvishuwo zvavo.
Ndiine ADSDAQ (isina kuitiswa pablog rangu parizvino), ndinogona kuseta mutengo wepashoma kune yangu real estate ASI shandisa zvimwe kushambadzira kana pasina munhu afunga kutenga. Ipfungwa yakanaka zvakadii!
Mune mamwe mazwi, kana ndikati bhatani repamusoro kuruboshwe rinokosha madhora zana nemakumi mashanu, Mushambadzi paADSDAQ anogona kuchengetedza chinzvimbo ichi obhadhara mutengo Nekudaro, kana pasina munhu anoruma, ndinogona kuratidza imwe shambadziro ipapo. Akangwara kwazvo. Iye zvino iwe sarudza izvo yako real estate yakakosha! Ndiri kuzochera mune izvi zvakadzika uye ndinovimba kuzonyatsoedza mumwedzi iri kuuya neADSDAQ. Chikamu chikuru ndechekuti ini handidi kusiya vanhu vandiri kushandisa izvozvi!
Chinyorwa paYahoo! Bhizinesi
Tags: kuita mari paIndanetikuita marimari
Mar 20, 2008 pa 2: 04 PM
Kutenda nemisoro kumusoro - ingoishanyira uye kusaina. Ndichiri mukuchinja pamusoro pekuti ndichagumisa sei mari yangu yese yekushambadza pamasaiti angu ese… izvi zvinogona kubatsira zvikuru.
JT- iyo Rubicon Project
Mar 23, 2008 pa 4: 19 PM
Douglas- ndinotenda nekutumira! Ndine basa repurogiramu yemuparidzi paRubicon Project. Ndiri kufara kunzwa nezve chiitiko chako chakanaka nepurogiramu yedu. Chikwata chedu chave kuchishanda zvakanyanya kubatsira vaparidzi vakaita sewe kuita mari yakawanda kubva kushambadziro pane yako saiti iwe uchiita shoma basa.
Zvirokwazvo chengetedza isu takatumira pane yako mhinduro.
iyo Rubicon Project
Mar 23, 2008 pa 6: 32 PM
Kutenda nekumira, JT.
Rubicon haina kutamba zvakanaka neADSDAQ saka ndaifanira kudhonza nzira iyoyo. Zviziviso zvakaratidza asi hapana mabhatani akaonekwa kunyoresa muRubicon. Hatigone kuva nazvo! Ini ndinofunga ndaigona kunge 'ndainyengera' nekushandira iyo peji kuburikidza neiframe, asi icho chidiki chekunyepedzera.
Ndasiya tsamba yekutsigira manheru ano. Imwe kudos pane yako vatengi sevhisi - imi vakomana mune zvisingaite.
Mar 25, 2008 pa 12: 54 AM
Iyo chaiyo nzira yakanaka yekuisa iyi positi yekugovana nesu. Zvigadzirwa zvacho zvakanyanyisa kunaka kuti zvive zvechokwadi uye ndinotarisira kuti vanhu vazhinji vachazvinyorera.
Kwandiri, ndichazviita nekukurumidza.